Mashruuc kale waxaa loogu talagalay gvSIG - Geofumadas
Mashruuc kale waa gvSIG
Febraayo, 2009 cadastre, GvSIG
Maanta waxaan lahaa kulan uu la aasaas muhiimad weyn in Central America, waxaana uu iga buuxisay qanacsanaanta weyn in la ogaado in ay la beegsado dalab si kor loogu qaado gvSIG loo isticmaalo degmada.
Waxaan tixraacayaa hay'ad diiradda saareysa Horumarinta Degmada, oo ah xarun ay ku sugnayd tan iyo 1993 oo mashruucan horumarinaysay mashaariicda gobolka dhexe ee dhexe. Waxaan ka bartay iyaga dhowr sano ka hor, markii ay la shaqeeyeen dhaqaalaha USAID, kor u qaadida casriyaynta nidaamyada dowladeed, oo ay ku jiraan aagga dhaqaalaha, cadastre iyo qorshe dhuleed ... inkastoo ay wax badan sameeyaan.
aasaaska horumariyo sagaashankii ah aalad loo yaqaan System Integrated degmada Information (SIIM) in ka mid modules loo isticmaalo oo ka mid ah waaxda Miisaaniyadda, Maaliyadda, Control Tax, Accounting iyo Cadastre sida mudnaanta, laakiin sidoo kale ka mid ahaa dadka kale. Sanadihii kuwa, dhismaha monolayer a on Visual Fox iyo links aasaasi in files qaab ArcView via 3x ceeriin.
Hadda waxaan arkay muuqaalkii ay u haajireen, oo ay sameeyeen sida ay ku warameen maamulahooda sare "Dib u habeyn dhamaystiran"Waxa la yiraahdo SIGMA Heerka Sare ee Maamulka iyo Maareynta Degmada. Nidaamku wuxuu soo bandhigayaa kaabayaasha isku dhafan, lakabka userka waa gebi ahaan shabakad, oo lagu horumariyo .NET C # iyo database MySQL oo u adeega xogta iyada oo loo marayo asp ka server ka ah Windows Server 2003. Waxaan aragnay farsamooyinka, waxaanan ku faraxsanahay, waxaan ka hadli doonnaa waqti dambe.
Ilaa imminka, nidaamku wuxuu leeyahay ugu yaraan 13 modules, oo u hoggaansamaya maaraynta dhaqdhaqaaqa badan ee degmada oo ku saabsan dhaqaalaha iyo cadastarka codsiga maaliyadeed. Kuwani waa qaybaha:
Diiwaangelinta Cashuuraha Isku-dhafan
Warshadaha iyo Ganacsiga
Ururrada kala duwan
Li'idiisa waa version a dib uqaabaynta wixii SIIM hore, iyadoo ka weyn version Hufnaan fikradeed. Sanadkan ku heshiin doonaa in toddoba degmo halkaas oo mid ka mid ah isku dayga aan ku xidhi doonaa kala cayncayn ah madal this, laakiin sidoo kale waxaan u malaynayaa in aan u doondooni doonaa si ay u hirgeliyaan khariidaynta ee degmada in uu yahay ka xoq on gvSIG, inay ogaadaan in dadkan biirsadaan karaa waayo-aragnimo ah si ay u sii wadaan in kale dhulal.
Illaa hadda, nidaamku wuxuu u shaqeynayaa heerka caadiga ah, laakiin markii aan waydiiyay sida ay u socdeen maaraynta joometeriga, waxay iga tageen farxad fiican:
Waxay la shaqeyn doonaan gvSIG.
Hadda mid ka mid ah wiilasha aasaasiga ah ayaa shahaadada Masterka ku qaatay jaamacada Girona, waxaan rajeynayaa in ay hay'adda kale oo aan horey u soo sheegnay si kor loogu qaado faafinta qalabkani isticmaalka dawladaha hoose, iyo waqti dheer oo ogaanaya haddii iyaga iyo iyaga aan kor u qaadno maalmaha GIS ee bilaashka ah ee gobolka Central American. Ma hubo haddii ay ku kalsoonaadaan inay ku biiraan Maalmaha III ee SIG xor ah oo ku dhow dhow, waxaan weli hayaa kulan soo socota iyaga.
Ilaa xad in hay'adaha kuwaas oo ay ku lug isticmaalka codsiyada isticmaalka jaban ama lacag la'aan ah habka xilgudashada ugu habboon oo ay leeyihiin mashaariicda dheeraad ah oo waara. Laga soo bilaabo waxa aan ogahay of this aasaas, oo jidka ku ag waa urur aan faa'iido, waxaan la hadli doonaa oo ku saabsan in sannadaha soo socda 10 sidii ay waayo-aragnimo ka badan sano 15 in fududeynta habka iyo casriyeynta nidaamka waa ballaaran, sidaa darteed waan arki doonaa haddii ay ku socon mowduuca.
Post Previous«Previous Taarikada Tectonic ee Google Earth
Post Next ProgeCAD, oo beddel u ah AutoCADNext »
2 Jawaab: "Mashruuc kale ayaa lagu beegsanayaa gvSIG"
Eduardo Bonilla isagu wuxuu leeyahay:
Shaqo fiican, hambalyo. Waxaan la shaqeyneynaa degmooyinka qaarkood ee El Salvador oo doonaya in ay fuliyaan SIG. Fadlan la xiriir
dusha sare isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay arday ka mid ah maamulka deegaanka ee venezuela, waxaanan u isticmaalayaa barnaamijkan mashruuc degmadeyda ah, taas oo macnaheedu yahay waxaan rabaa inaan arko macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dadaalkan aadka u wanaagsan si aan u helno tixraac in daraasadaydu ii faa'iideyso aniga iyo mahadsanid hore!